I-Wovie TV Apk Download Ye-Android [Amamuvi] - I-Luso Gamer
January 4, 2022 by John Smith
Uma ukhathele ukucinga inkundla yokuzijabulisa yamahhala eku-inthanethi. Lapho abasebenzisi be-Android bengasakaza kalula ama-Movie angapheli nochungechunge mahhala. Bese sincoma labo basebenzisi be-smartphone ukuthi balande futhi bafake i-Wovie TV Apk.
Ngaphandle kokunikeza ukuzijabulisa okungenamkhawulo, lokho kufaka phakathi ama-movie, uchungechunge, idokhumentari, Imidlalo ye-TV nokuningi. Uhlelo lokusebenza luphinde lwasusa izikhangiso ezicasulayo ezibonakala kakhulu esikrinini. Ngenkathi ubuka noma usakaza amavidiyo ngezikrini.
Inqubo yokufaka nokusetshenziswa kwe Uhlelo lokusebenza lwe-Movie ilula kakhulu. Nokho uma kucatshangelwa ukunethezeka kwabasebenzisi be-android, lapha sizosho zonke izinyathelo ezibalulekile ezihlanganisa ulwazi. Ukuze ujabulele amafilimu angapheli siphakamisa ukuthi abasebenzisi be-android bafake i-Wovie TV App.
Iyini i-Wovie TV Apk
I-Wovie TV Apk iwumthombo okahle wokuzijabulisa okuku-inthanethi, lapho abasebenzisi be-Android bengakwazi amavidiyo angenamkhawulo. Lokho kufaka phakathi ama-movie nochungechunge mahhala ngaphandle kokubhaliswa noma ukubhalisa. Ngaphandle kwalokhu, ababukeli bangasakaza Amadokhumentari nemidlalo ye-TV.
Selokhu kwaqala ukuhlasela kobhubhane, isidingo sokuzijabulisa siye sakhula. Isizathu yingoba abantu babambeke endaweni eyodwa ngenxa yengozi yokuhlukana kwezifo. Ngisho neziphathimandla zezempilo zincoma ukuthi izikhungo ezithintekayo zivale uhlelo ngalunye.
Ngenxa yenhlalo, ezomnotho kanye nezemfundo ziwe phansi. Manje abantu babambeke endaweni eyodwa futhi abanakho omunye umsebenzi ngaphandle kokuhlala ngaphakathi emagcekeni asekhaya. Esimeni esinjalo lapho abantu bevaleleke ngaphakathi ezindlini zabo, baqala ukucinga izinkundla zamahhala eziku-inthanethi.
Lapho bengasakaza kalula okuqukethwe kwevidiyo eyintandokazi engapheli. Ngoba amapulatifomu afana neNetflix, i-Amazon Prime, i-HBO ne-Disney adinga ukubhaliswa. Ngakho-ke ucabangela ukufinyelela okulula nokukhululekile kumavidiyo lapha abathuthukisi balethe i-Wovie TV Download.
Igama Wovie TV
Usayizi 3.94 MB
Igama lephakheji com.wovietv.celular
Iyadingeka i-Android 4.1 no-Plus
Uma sikhuluma ngenqubo yokufaka nokusetshenziswa kwesicelo. Bese kulula kakhulu, abasebenzisi bokuqala bayacelwa ukuthi balande ifayela le-Apk lakamuva. Lokho kungafinyeleleka kusukela lapha ngokuchofoza okukodwa ngaphakathi kwesixhumanisi sokulanda.
Manje qalisa inqubo yokufaka futhi uma isiqedile. Manje vakashela imenyu yeselula bese wethula okuqukethwe kohlelo lokusebenza. Khumbula ukuthi amavidiyo afinyeleleka kalula ukuze asakazwe ngaphakathi kwedeshibhodi enkulu. Vele uchofoze kuvidiyo futhi ujabulele okuqukethwe okuyi-premium mahhala.
Izici ze-pro ezifinyeleleka ngaphakathi kohlelo lokusebenza zifaka Isihlungi Sosesho Lwezifiso, Isikhumbuzi Sesaziso Sokusunduza, Izigaba Ezicebile, Isidlali Sevidiyo Esakhelwe Ngaphakathi, Ideshibhodi Yokusetha Ngokwezifiso, Amaseva Asheshayo, Uhlu Lokuhlola Oluyintandokazi, Imibhalo Engezansi Yezilimi Eziningi nokunye.
Ukwengeza okukhulu abasebenzisi be-Android abazokuthanda amaseva asabela ngokushesha. Inhloso yokwengeza lezi ziphakeli ezisheshayo ukusheshisa inqubo yokuhlinzeka ngedatha. Ngaphezu kwalokho, ingase futhi ilungise ikhwalithi yevidiyo elanda ababukeli isivinini se-inthanethi.
Kuze kube manje asikwazi ukubona izikhangiso zezinkampani zangaphandle ngaphakathi kwesicelo. Nokho abathuthukisi bayaqinisekisa ukuthi abahlelile ukungeza okunye kwalokho. Uma uthanda ngempela izici ze-pro nokuqukethwe kwe-premium landa i-Wovie TV Android kusuka lapha.
Ifayela lohlelo lokusebenza likhululekile ukulanda.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza amavidiyo okuzijabulisa angapheli.
Lokho kufaka phakathi ama-movie, uchungechunge, izinhlelo ze-TV namadokhumentari njll.
Awekho ama-IPTV aqondile atholakalayo ongawakhetha.
Izikhangiso ezivela eceleni zivinjelwe.
Azikho izikhangiso ezivela eceleni ezivunyelwe.
Okubhaliselwe kususwa ngokuphelele.
I-App interface igcinwa ilula.
Ungalanda Kanjani I-Wovie TV Apk
Ngenkathi sisho ngokulanda inguqulo yakamuva yamafayela e-Apk. Abasebenzisi be-Android bangathembela kuwebhusayithi yethu. Ngoba lapha kuwebhusayithi yethu, sinikezela ngamafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo kuphela. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi kanye nobumfihlo.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle uma ithimba liqinisekile ngokusebenza kahle, asilokothi sinikeze ifayela lohlelo lokusebenza ngaphakathi kwesigaba sokulanda. Ukulanda inguqulo ebuyekeziwe ye-Apk sicela uchofoze isixhumanisi esinikeziwe esingezansi.
Izinhlelo zokusebenza ezinjalo ze-android ezisekelwa yizinkampani zangaphandle zibhekwa njengengozi ukuzifaka. Nokho sinikeza lawa mafayela e-Apk ngaphakathi kwesigaba sokulanda, sesiwafakile kakade lawo kuma-smartphones ahlukene. Ngemva kokufaka uhlelo lokusebenza asikaze sithole inkinga eqondile ngaphakathi.
Lapha kuwebhusayithi yethu, sesivele sabelane ngenqwaba yezinye izinhlelo zokusebenza ezihlobene nokuzijabulisa. Okutholakala mahhala futhi akudingi ukubhaliswa kokubuka ama-movie nochungechunge. Ukuze ujabulele lezo ezinye izinhlelo zokusebenza sicela ulandele izixhumanisi. Okukhona HDO Player apk futhi Ifilimu Flix TV Apk.
Ngakho-ke ubambeke endaweni eyodwa ngenxa yenkinga yamanje yobhubhane futhi ufuna umshini wokubulala isikhathi. Bese labo basebenzisi be-smartphone kufanele bafake i-Wovie TV Apk. Lokho kuyafinyeleleka ukufinyelela lapha ngokuchofoza okukodwa.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi Uhlelo lokusebenza lwamamuvi, I-Wovie TV ye-Android, I-Wovie TV Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-Wovie TV, Wovie TV Download Imeyili kwemikhumbi
I-PenguinsTok Apk Download For Android [TikTok Alternative]